Network Essentials (မြန်မာ)
Network ကို အခြေခံကစပြီးတော့ ချိတ်ဆက်ပုံတွေ၊ အသုံးပြုပုံတွေကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့အပြင် DNS ဆိုတာဘာလဲ၊ FTP ဆိုတာဘာလဲစတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းပြထားတာဟာ အတော်လေးကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်. ဆရာဦးဇော်လင်း ရေးသားထားတာပါ။ ၀ဘ်ဆိုက်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင် စားတဲ့ သူများအတွက်ကော networking နှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်တဲ့သူ လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့သူများအတွက် တန်ဖိုးလုံးဝ ဖြတ်မရပါဘူး. network နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရောတွေအရမ်းများပါတယ်. စာမျက်နှာပေါင်း (395)မျက်နှာပါပါတယ်. ၀ဘ်ဆိုက်အပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလဲ hosting အပိုင်းကို မသိတဲ့သူတွေအဖို့ ဒီစာအုပ်ဟာ အခြေခံပါပဲ. လုံးဝလေ့လာထားသင့်ပါတယ်. ငါက အခုလက်ရှိ networking ပိုင်းလုပ်နေတာပဲ လေ့လာစရာမလိုဘူးလို့ မသတ်မှတ်ပါနဲ့ ကိုမသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်. သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ. ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်လာမှာပါ စာအုပ်က ဆိုဒ် သိပ်မကြီးပါဘူး (65MB)ပဲရှိပါတယ်. . အားလုံး အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်. ဘာအကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုတာ အောက်မှာ အနည်းအကျဉ်းလောက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်. အကြောင်းအရာတွေ များတဲ့အတွက် အကုန်လုံးတော့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး. Download လုပ်ပြီးတော့သာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ.
network concept ကွန်ရက်ဆိုတာ
networking advantages ဘာ့ကြောင့်ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရသလဲ
Network infastructure ဆိုတာ
Type of Network ကွန်ရက်အမျိုးအစားများ
Network Medium ကြားခံဆက်သွယ်ပေးသည့် device များ
Network protocol ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ
Network software ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်
network services ကွန်ရက် ၀န်ဆောင်မှု
Peer to Peer Networking ဆိုတာ
Server Based Network ဆိုတာ
Workgroup model အကြောင်း
domain model အကြောင်း
Storage area Network အကြောင်း
Hybrid Network အကြောင်း